Maxaa La Gudboon Umadda Reer Puntland ..Bulshooy Kaca…Umad yahey Isku duubnaada … – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Maxaa La Gudboon Umadda Reer Puntland ..Bulshooy Kaca…Umad yahey Isku duubnaada …
Puntland ayay ka go’an tahay in ay difaacato Sharafta iyo Karaamadeeda iyo in ay dib u soo ceshato dhulka ka maqan, ama sidda ay sheegtay in lasoo xiro xaduudaha Puntland oo ah deegaan ka durugsan magaalada Caynaba ee gobalka Sool, taas oo ka dhigan dagaal adag oo la galayo.
Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay dagaal waqti dheer qaadanaya oo dib loogu xoreynayo dhulkii lagu asaasay Puntland, kaas oo ay maamulka la baxay Somaliland soo galayeen 12-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Cutubyada gaarka ah ee ciidamada Puntland ayaa u gudbay jiidaha dagaalka, si ay uga hortagaan duulaamada iska xoornimo ee maamulka la baxay Somaliland, waxaana la arkayey hubka culus oo ay ciidamadu la gudbayaan.
Ganacsatada Somaliland waxay balan-qaadeen dhaqaale fara badan oo ay ku taageerayaan damaca maleeshiyaadkooda, waxaana la rumeysan yahay in mid kamid ah shirkadaha Somaliland ee laga leeyahay, oo xarumo waa weyn ku leh Puntland ay bixisay dhaqaale lagu soo weeraro Puntland, halka ay faa’iidana ka rabto shacabka gudaha Puntland.
Ganacsatada Puntland & Shacabkeeda ayaa ku jira hudo-dheer oo aysan wali fahmin ujeedada dagaalka, waana arrin aan horey loogu aqoonin, waxayna ka dhigan tahay in ay maqlayaan oo kaliya wararka dagaalka oo ay is weydiinayaan, waxaana la gaaray waqtigii ay u kici lahaayeen difaaca dalkooda.
Dawladda Puntland ayaa hoosta ka xariiqday si rasmi ah in aysan joojin doonin dagaalkan oo ay dib ugu qabsan doonto deegaanadii ay Somaliland kusoo durkaysay tan iyo markii la dhisay Puntland, waxayna si cad u sheegaytay in looga baahan yahay shacabku in ay doorkooda qaatan.
Ganacsatada mandiqada oo ah kuwa ugu badan ee ka faa’iida nabadda ayaa doorka u banaan uu yahay in ay garab siiyaan ciidamada Difaaca oo ay ku taageeraan agabyada ay u baahan yihiin iyo Dhaqaalaha, maadaama dhigooda Somaliland ay wax kasta bixinayaan oo ay doonayaan sii haysashada ciidamadooda ee dhul aysan laheyn.
Shacabka Puntland ayaa lagu yaqaanaa dal jaceyl iyo in ay si deg deg ah uga jawaabaan weerarada gardarada ah ee ay cadowgu ku soo qaadaan dalka, waxaana muuqata in ay hadda u diyaar garoobayaan sidii ay doorkooda xoreynta dhulka maqan u qaadan lahaayeen.
Gurmadyii ugu faraha badnaa ayaa ka socda gobalada oo dhan, waxaana lafilayaa in todobaadyada nagu soo aadan ay ciidamada Puntland gudaha u galaan magaalada Laascaano ee xarunta gobalka Sool oo 11-kii sanno ee lasoo dhaafay aan laga taagin Calanka Jamhuuriyada Soomaaliya iyo kan Puntland.